ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၁၇-၂-၂၀၁၄)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၁၇-၂-၂၀၁၄)
ဒီမိုကရေစီစနစ် မှာ ပြည်သူအများစုက တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်စေချင်တဲ.သူဟာ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ကိုဖြစ်ရပါမယ် ။ အဲလိုမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင်.သုံးတာ မဟုတ်တဲ. အပြင် ပြည်သူတွေရဲ. အင်အားထက် မတရား (လက်နက်အားကိုး)လွှမ်းမိုးထားတဲ. အင်အားစုက ကြီးထွားနေလို.ဘဲ ။ ကျွန်တော် ပြောတာ - - - မှားလား ?
...... ဒီမိုကရေစီ စနစ် လိုလါးသူများ ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
ANY SIDE , ANY REVIEW ပါ ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ စစ်မှန်တဲ့ Democracy ကျင်သုံးတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာက အများပြည်သူလက်ခံပြီး ရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့သူ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနိင်ငံကိုတရားမျှတမှုရှိအောင် တစ်ဖက်တန်းစောင်းနင်းဖြစ်မသွားဖို့ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့ အားလုံးကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ Constitution, ဥပဒေ မျှတတဲ့တရားစီမှုစနစ်တွေရှိဖို့က အရမ်းလိုအပ်သလို အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သို့မဟုတ်ရင်တော့ Democracy ဖြစ်မလာပဲ အုပ်စုဖွဲ့ နိုင်ထက်စီးနှင်းပြုတဲ့ အင်အားငယ်သူအပေါ် ထင်တိုင်းကျဲရမ်းကားတဲ့ Mobocracy ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံလို မတူကွဲပြားတဲ့ ပြည်ထေညင်တွေကိုစုစည်းပြီး နိုင်ငံတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငငံတွေမှာပေါ့။